San Htun's Diary: ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၂၄
ဧပရယ်လဒုတိယပတ်မှာ ကိုယ်တို့ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ကျင်းပတော့မှာ။ သင်္ကြန်အကြိုနေ့ ၊ အကျနေ့ ၊ အကြတ်နေ့ ၊ အတက်နေ့ ၊ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ဆိုပြီး ၅ ရက်တောင် ကျင်းပတာ။ အစိုးရရုံးတွေဆို ၁၀ ရက်တောင် ပိတ်တာ။ ကိုယ်တို့ သကြန်နဲ့ယိုးဒယားပြည်က ဆုန်ကရန် Songkran ပွဲတော် ဆင်တူတယ် နှစ်နိုင်ငံစလုံးက ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေ ဆိုတော့လေ။ ကိုယ့်ဆူပါဗိုက်ဆာ တရုတ်မယန်းကို ပြောပြတော့ နှစ်သစ်ကူးမှာ ဘာလုပ်လဲ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ ဘာတွေရွတ်ဖတ်လဲလို့မေးတယ်။ ကိုယ်လား ဘုရားမရှိခိုးတာတောင်ကြာပြီ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲ၊ စိတ်ထဲမှာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ မိဘ၊ ဆရာတွေကို မမေ့ဘူးဆိုတော့ ယန်းက ရယ်လိုက်တာ။ ကိုယ်တို့ ဘဒ္ဒကမ္ဘာမှာ ဘုရားငါးဆူပွင့်မှာ လေးဆူတော့ ပွင့်ပြီးပြီ တစ်ဆူပွင့်ဖို့ကျန်သေးတယ်။ အရိမေတ္တယျ မြတ်စွာဘုရားတဲ့ ကံကော်ပင်အောက်မှာ ပွင့်မှာ။ ဘယ်တော့ပွင့်မှာလဲ မသိဘူး အင်္သချေ million million years ကြာပြီးတော့မှ ပွင့်မှာ။ ယန်းက ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကို သိတယ်။ သူ့ အဒေါ်ဆို ဘုရားကျောင်းကန်သွား၊ ပုတီးစိပ်၊ အမဲသား မစားဘူးတဲ့။ ကြည့်ရတာ သူ့ အဒေါ်ကတောင် ကိုယ့်ထက် ဘုရားတရား လုပ်သေးတယ်တဲ့။ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဂါယာဆိုတာ ဘုရားလေးဆူ ပွင့်ခဲ့တဲ့နေရာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ တသက်တခေါက် ရောက်သင့်တဲ့နေရာ။ ကိုယ်တို့ နိုင်ငံက ရွှေတိဂုံဘုရားမှာလည်း ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ ဘုရားလေးဆူရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကို ဋ္ဌာပနာထားတာ။ မင်းတို့ တရုတ်ပြည်က ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်တောင် ကိုယ်တို့ နိုင်ငံကို ပင့်ဆောင်ပြီး ပူဇော်ကြသေးတယ်။ ဂူဂယ်မှာ ရှာကြည့်တော့ ဘေဂျင်း လင်ကွမ် Linggung ကျောင်းက ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်တဲ့။
ယန်းက ဟင်...သူ မသိပါလား သူတို့ ဆီမှာ ထင်ရှားတာက ဗုဒ္ဓလက်ရိုးတော် မြေအောက်တိုက်မှာ တွေ့ တာ ရွှေချုပ် ၇ ခုထဲမှာ ထည့်ထားတယ်။ လက်ရိုးတော် ၃ ခုထဲမှာ တခုက အစစ်၊ ၂ ခုက fake လို့မခေါ်ဘူး shadow လို့ ခေါ်တယ်။ အင်း မြန်မာလိုဆိုရင် ပွားတယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့။ တခုက သိပ္ဗံနည်းကျစစ်ဆေးပြီးတော့ ဗုဒ္ဓလက်ရိုးတော်အစစ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။ ပိတ်ရက်တွေ၊ အခါကြီးရက်ကြီးတွေဆို ဓာတ်တော်ချုပ်ကိုဖွင့်ပြီး အပူဇော်ခံတယ် သူတို့ သွားတုန်းက မဖွင့်လို့မဖူးလိုက်ရဘူး။ သူတို့ တရုတ်ပြည်မှာတော့ xian ပြည်နယ်က ဗုဒ္ဓလက်ရုိုးတော်က တန်ခိုးကြီးတယ်။ နေပါဦး ဗုဒ္ဓလက်ရိုးတော်က မင်းတို့ တရုတ်ပြည်ကို ဘယ်လိုရောက်လာတာတုန်း။ ဗုဒ္ဓဘာသာမင်းတစ်ပါးလေ အရမ်းနာမည်ကြီးတယ်လေ ကိုယ်တို့ တွေက အာယူမင်းလို့ ခေါ်တယ်။ သူက ဗုဒ္ဓဘာသာပြန့် ပွားစေချင်လို့သာသနာပြုရင်းနဲ့ရောက်လာတာ။ မင်းပြောတဲ့ အာယူမင်းဆိုတာ ကိုယ်တို့ က သီရိဓမ္မာ အသောကမင်းလို့ခေါ်တဲ့ မင်းနေမှာ။ ရေတွင်းရေကန်တွေပြင် ဘုရားကျောင်းတွေဆောက် ဗုဒ္ဓဘာသာပြန့် ပွားအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ မင်းကောင်းမင်းမြတ် အင်္ဂလိပ်လုို Ashoka လို့ ခေါ်တယ်။ ကပိလဝတ်၊ ရာဇဂြိုလ်၊ ကုသိနာရုံ၊ အသောက ကြည့် ... ကိုယ်တို့ မြန်မာမှုပြုတာ တော်တော်နီးစပ်တယ်။
ယန်းရေ မေးပါရစေဦး Laughing Buddha ဆိုတာ ဘာလဲ။ ကိုယ်တို့ ကတော့ နောင်ပွင့်မယ့် မြတ်စွာဘုရားလို့ယုံကြည်ကြတယ်။ ဗိုက်ရှေ့ မှာ လက်နှစ်ဖက်ဆန့်ချိတ်ဆက်လို့ဗိုက်ပူကြီးသဏ္ဌန်လုပ်ပြပြီး ဘုရားရေ...နောင်ပွင့်မယ့် မြတ်စွာဘုရား ဘယ်လိုနည်းနဲ့ မှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကိုယ်ပြောတော့ ယန်းက ဟဲ့... မြတ်စွာဘုရားကို ရယ်မနေနဲ့ တဲ့။
နယူးဂျာဆီပြည်နယ် မနာလပန်မြို့ နယ်မှာ တည်ထားတဲ့ အမေရိကန်မြန်မာဗုဒ္ဓအသင်း မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာကျောင်းက ရွှေတိဂုံဘုရားပုံစံတူကိုပြတော့ ဂြိုလ်တိုင်တွေကို ဘာလဲတဲ့။ ခုနစ်ရက်မွေးနေ့ ကို ကျား၊ နဂါး၊ ဆင်တွေနဲ့ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ ဂြိုလ်တိုင်တွေ အင်္ဂါနေ့ မွေးရင် အင်္ဂါဂြိုလ်တို်င်မှာ ဘုရားဝတ်ပြုကြတယ်။ "But there are only seven days in the week. One point of the compass will be vacant." ဒါဆို တနေရာ လွတ်နေမှာပေါ့ မလွတ်ပါဘူး ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ ဖက်မွေးရင် စွယ်စုံဆင် ညဖက်မွေးရင် ရာဟု အစွယ်မပါတဲ့ ဟိုင်းဆင်။ ကန်တက်ကီအိမ်က အိမ်ရှင့်ကလေးတွေက လူးကပ်က အသက် ၈ နှစ်၊ ကေတီက ၅ နှစ်။ တနေ့ တော့ အိမ်ရှင်လင်မယား ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မှာမို့ကလေးတွေကို အိမ်မှာချန်ထားခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကို ကလေးတွေကို တချက်ကြည့်ပေးဖို့ရီကွက်လုပ်တယ်။ လူကြီးမရှိဘဲ ကလေးတွေချည်းပဲ ထားခဲ့ရင် အိမ်နီးချင်းတွေက ရဲတိုင်နိုင်တယ်တဲ့။ ကန်တက်ကီပြည်နယ် လူဝီဗီလ်မြို့ က အရှေ့ တောင်အာရှ ခရစ်ယာန်အသင်းက ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးရေးမှာ ကိုယ်က ဗော်လန်တီယာ စကားပြန်လုပ်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ မွန်တမီးလ်မိသားစုက အစ်ကိုကြီးက သူ့ သားကို ဆိုင်အဝမှာ စောင့်ခိုင်းပြီး ဆိုင်ထဲကို ပြေးဈေးဝယ် ပြန်ထွက်လာတော့ ရဲက စောင့်နှင့်နေပြီ။ အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးတွေကို မိဘအစောင့်အရှာက်မရှိရင် ရဲက တစ်ကဒ်ပေးတယ်။ ဒဏ်ငွေမဆောင်ချင်ရင် သင်တန်းတွေ တက်ရတယ်။ မေရီလန်းပြည်နယ် ဆေးဗားလ်စပရင်းမြို့ မှာ အသက် ၆ နှစ်နဲ့၁၀ နှစ် ကလေးနှစ်ယောက် ကစားကွင်းကနေ အိမ်ကို လူကြီးမပါဘဲ လမ်းလျှောက်ပြန်လာတာကို ရဲကတွေ့ လို့မိဘတွေ ဒဏ်တပ်တယ်။ မေရီလန်းပြည်နယ် ဥပဒေအရ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးတွေကို မိဘအစောင့်အရှောက်မပါဘဲတွေ့ ရင် ဒဏ်ရိုက်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေ မိဘတွေကတော့ သူ့ ကလေးတွေကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်အောင်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိအောင်လို့ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း စိတ်ချရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မို့လွှတ်တာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်မှာ အွန်လိုင်းမှာ အငြင်းအခုန် viral ဖြစ်နေပါတယ်။ တချို့ က ထောက်ခံတယ်၊ တချို့ က ၁၈ နှစ်အစား ၁၅ နှစ် ဖြစ်သင့်တယ်။ စိတ်ဝင်းစားရင် ဒီလင့်ခ် မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာ ကျောင်းကနေ အိမ်အထိ ၁ မိုင် လမ်းလျှောက်ခိုင်းတဲ့ ကလေးမိဘတွေကို ဒဏ်ရိုက်တယ်။ ကိုယ်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို တရွာလုံး ရွာရိုးကိုးပေါက်အောင် လျှောက်သွား၊ ဆော့နေကြတာ။ ပုသိမ်မှာ ကျောင်းတက်တော့လည်း ကိုယ့်ဘာသာ ကျောင်းသွား၊ ကျူရှင်သွား။ ရန်ကုန်ရောက်တော့လည်း သင်္ကန်းကျွှန်းဖက်မှာ ကျူရှင်အဝေးကြီး သွားတက်တာ တစ်ရက်ပဲ မကြီးက လိုက်ပို့ ပေးတယ် နောက်နေ့ကိုယ့်ဘာသာသွားပဲ။ အိမ်ဘေးက ကိုယ်နဲ့ သက်တူရွယ်တူ ကောင်မလေးကတော့ ကျူရှင်ဆိုလည်း မိဘတွေ၊ အစ်မ၊ အစ်ကိုတွေ လိုက်ပို့ တယ်။ တက္ကသိုလ်တက်တော့လည်း ကျောင်းကားဂိတ်မှာ အကြိုအပို့ စောင့်တယ်။ အဲဒီလို အထိန်းအချုပ်လုပ်လို့ နဲ့ တူတယ် ကျောင်းတောင်မပြီးသေးဘူး ယောက်ျားနောက် လိုက်ပြေးပါလေရော။ ကိုယ်တို့ တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတက်တာကို တနေကုန်ထိုင်စောင့်နေတဲ့ အန်တီကြီးတစ်ယောက် တွေ့ ဖူးတယ်။ အိမ်မှာ ဘာမှ လုပ်စရာမရှိဘူးနဲ့ တူပါရဲ့ကျောင်းမှာ တနေကုန် လိုက်စောင့်နေတာ ပျင်းစရာကြီး။ ကိုယ်ကတော့ မလွတ်လပ်လိုက်တာလို့ခံစားမိတယ်။ ကိုယ့်ကို အဲဒီလို လိုက်စောင့်ပေးတာကိုလည်း မကြိုက်ဘူး ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ် ဆက်နေတာကိုလည်း မကြိုက်ဘူး။ ကိုယ်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ gathering လုပ်လို့အပြန်နောက်ကျရင် မကြီးက ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ် ဆက်နေတတ်တယ်။ ကိုယ်က ဖုန်းတခြား လူတခြား အဲဒီလို ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ် ဆက်နေလို့ ကတော့ ဖုန်းလုံးဝမကိုင်တော့ဘူး။
ကိုယ့်ကို အဲဒီလို စိတ်ပူနေတာကြီးကို မကြိုက်တာ ကိုယ် အသက် ၃၀ ကျော်နေပြီ ကိုယ့်အန္တရာယ် ကိုယ်သိတယ် သူတို့ က စိတ်ပူတာပဲ တတ်နိုင်တယ်။ တခုခုဆိုရင် ၉၁၁၊ နယူးယောက်က အိုမားတို့ ကမှ တကယ်ကူညီနိုင်တာ။ မိန်းပြည်နယ်က စင်သီယာနဲ့ဘရန်ဒန်တို့ အဖြစ်အပျက်က ထူးဆန်းတယ်။ သူတို့ မှာ ၃ နှစ်အရွယ် သမီးရိုစလင်းနဲ့၁ နှစ်အရွယ် သားရိုက်ဒါ ရှိပါတယ်။ ရိုက်ဒါ မွေးပြီး ၂ လသားအရွယ်မှာ ခြေထောက်တွေ ယောင်နေတယ်ထင်လို့ဆေးခန်းသွားပြတော့ ကလေးအရိုးတွေ ပြုတ်ထွက်နေတယ်။ အဲဒါ လူကြီးတွေက ဖြစ်ညှစ်၊ ရိုက်တာ ဖြစ်ရမယ်လို့ဆရာဝန်ဆေးစစ်ချက်ကြောင့် သူတို့ လင်မယားကို child abuse ဆိုပြီး တရားစွဲပါတယ်။ ကလေးဖခင်က နှစ်ရှည်လများ ထောင်ကျနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေကိုလည်း မိဘတွေနဲ့အတူမထားတော့ဘဲ ကလေးတွေရဲ့အဘိုး မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ မွေးစားမိဘ စင်သီယာရဲ့ အဖေက စောင့်ရှောက်ရပါတယ်။ နှစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ် ကလေးတွေကို တွေ့ ခွင့်ရပါတယ် ဒါကလည်း လူကြီးတွေ မျက်စိရှေ့ မှောက်မှာပါ။ တက္ကဆက်မှာနေတဲ့ စင်သီယာအဘွားက တီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ရိုက်ဒါလေးရဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ တူတဲ့သတင်း တွေ့ မိတယ်လို့သတင်းပေးပါတယ်။ ရှာဖွေကြည့်တော့ တက္ကဆက်က ဘရိုင်ယာနဲ့အန်းထရူးတို့ ရဲ့သမီးလေးကန်လေမှာ ရှားပါးတဲ့ EDS ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်နေလို့အရိုးတွေ ပြုတ်ထွက်သလို ဖြစ်ပါသတဲ့။ child abuse ဆိုပြီး ဖခင်ကို တရားစွဲ နောက်တော့မှ EDS မှန်း သိသွားလို့တရားရုံးမှာ ခြေပလို့ခုတော့ မိသားစုတွေ ပြန်ဆုံနေကြပါပြီ။ မိန်းပြည်နယ်ရဲ့ဥပေဒအရ ခြေပခွင့် ခက်ခဲပေမဲ့ စင်သီယာနဲ့ဘရန်ဒန်ကတော့ သူတို့ မိသားစု ပြန်ဆုံစည်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ABC News 2020 အင်တာဗျူးမှာ ဖြေကြားသွားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် ဒီလင့်ခ် မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
စီအန်အေ (Channel News Asia)၊ အေဘီစီနယူးစ် ABC News တို့ က သတင်းထောက်တွေကို အားကျပြီး ကိုယ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာက သတင်းထောက်။ စာရွက်ကြီးတွေကိုင်ပြီး ဖတ်နေတဲ့ မြန်မာ့အသံက သတင်းကြေငြာတဲ့သူတော့ မလုပ်ချင်ဘူး။ နောက်တစ်ခု ကိုယ်ဖြစ်ခဲ့ချင်တာ အာကာသယာဉ်မှုး ဘရူဝီလီ၊ ဘင်အက်ဖ်ဘလက်၊ လစ်ဖ်တိုင်လာတို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အာမန်ဂန်တန် Aremegaddon ရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်ပြီး အာကာသယာဉ်မှုး ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ။ ဆန်ထရာဘူးလော့ခ်နဲ့ဂျော့ကလူနီ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဂရာဖစ်တီ Gravity ရုပ်ရှင်ကားကိုလည်း ကြိုက်တာပဲ။ ကိုယ့်ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဗီယက်နမ်လေးဟွားလဲ့နဲ့ နီပေါလေးရာဂျက်တို့ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် အော်လန်ဒိုမြို့ က နာဆာ NASA အာကာသစခန်းကို သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အကြောင်း ဓာတ်ပုံတွေတင်တော့ တစ်နေ့ တော့ ကိုယ်အရောက်သွားဦးမယ်လို့တွေးမိတယ်။ အခွင့်ကြုံရင် အာကသယာဉ်တွေ လွှတ်တင်တာကို မျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြည့်ချင်မိသား။ နယူးအင်္ဂလန်အဲယားပြတိုက်ကို သွားလည်တုန်းက ကိုယ်ဝယ်လာတဲ့ ဒစ်ကာဗာရီအာကာသယာဉ်လေးကို ကိုယ်သိပ်သဘောကျတာ ကိုယ့်အလုပ်စားပွဲမှာ တင်ထားတယ်။ တလောက အေဘီစီသတင်းတွေ နားထောင်ရင်း မားစ်ဂြိုလ်ကိုသွားရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ သတင်းဖတ်လိုက်ရတယ်။ ယူတာ့ပြည်နယ်ရဲ့ခေါင်သီလှတဲ့နေရာ မားစ်ဝမ်းသဲကန္တာရသုတေသနဋ္ဌာနမှာ ထရိန်းနင် ဆင်းနေတဲ့ အသက် ၂၇ အရွယ် ကယ်လီ။ ကယ်လီက မကြာသေးခင်ကမှ စေ့စပ်ထားသူ ဒါပေမဲ့ မားစ်ဂြိုလ်သွားဖို့ ကတော့ သူ့ ရည်မှန်းချက်တဲ့။ နောက်တစ်ယောက်က ၃၅ နှစ်အရွယ် နည်းပညာရှင် ပီယန်၊ ကလေး ၄ ယောက်ဖခင်။ မားစ်ဝမ်းဆိုတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းက မားစ်ဂြိုလ်ကို သွားရောက်ဖို့အာကာသယာဉ်မှုးတွေ ဖိတ်ခေါ်တော့ တကမ္ဘာလုံးကနေ ၂ သိန်းကျော် ဝင်လျှောက်ကြပါသတဲ့။ အဲဒီထဲကမှ ၁၀၀ ကျော်ကို ပမာဏ ရွေးချယ်ပါတယ် ပြီးတော့မှ နောက်ဆုံး ၃ ယောက်ကို ရွေးမှာပါ။ စိတ်ဝင်စားရင် အေဘီစီနယူးစ်က ဒီလင့်ခ် မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
စကာတင် ၁၀၀ ယောက်ထဲမှာ ပီယန်း အရွေးခံရပါတယ်။ လျှောက်ကြတဲ့သူတွေဟာ မားစ်ခရီးစဉ်က one way ticket to never return ပြန်မလာနိုင်တဲ့ ခရီးစဉ်မှန်း သိကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ အိမ်မက်က အာကာသကို သွားရောက်ဖို့ တဲ့။ မားစ်ဂြိုလ်ဟာ ကမ္ဘာကနေ မိုင်သန်း ၂၀၀ ဝေးပြီး ခုနစ်လ ခရီးနှင်ရပါ။ မားစ်ဂြိုလ်ကို လူသားတွေ ခြေချနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီး တစ်နေ့ ပျက်စီးတဲ့အခါ တခြားဂြိုလ်တွေမှာ အခြေချထားမှပဲ လူသားမျိုးနွယ် မတုန်းမှာလို့သိပ္ဗံပညာရှင်တွေက ယူဆထားပါတယ်။ ခုဆိုရင် Space - X ၊ Virgin Galactic အဖွဲ့ အစည်းတွေကနေ အာကာသကို အလည်တခေါက် သန်း ၂၀ ကြေးနဲ့ပို့ ဆောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ကြေငြာနေကြတယ်။ ကိုယ်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက သိပ္ဗံမဂ္ဂဇင်းစာစောင်တွေမှာ ယူဖိုးလို့ခေါ်ကြတဲ့ ဂြိုလ်သားတွေအကြောင်း ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ခုထိ ယူဖိုးတွေ တွေ့ ရတယ်လို့သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာပေမဲ့ သိပ္ဗံပညာရှင်တွေက ရှင်းမပြနိုင်သေးဘူး။ မားစ်ဝမ်းအဖွဲ့ အစည်းကို ၂၀၁၁ မှာ တည်ထောင်ပါတယ် Non profit organization ပါ။ ၂၀၁၃ မှာ ခရူမန်ဘာတွေ ရွေးချယ်ပြီး ၂၀၁၅ မှာ ထရိန်နင်ဆင်း။ ၂၀၂၆ မှာ Crew One ထွက်ခွာပြီး ၂၀၂၇ မှာ မားစ်ဂြိုလ်ကို ဆင်းသက်မှာပါ ၂၀၂၈ မှာ Crew Two ထွက်ခွာပါမယ်။ သေချာတာကတော့ ၂၀၂၆ မားစ်ဝမ်း ခရီးစဉ်စတင်တဲ့အခါ တကမ္ဘာလုံးက စောင့်ကြည့်ကြမှာ ဖြစ်သလို ၂၀၂၇ မားစ်ဂြိုလ်ကို လူသားတွေ စတင်ခြေချ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်း တကမ္ဘာလုံးက စောင့်ကြည့်နေကြမှာပါ။ ၁၉၆၉ ဂျူလှိုင်လ Neil Armstrong နဲ့Buzz Aldrin အာကာသယဉ်မှုးနှစ်ယောက် လကမ္ဘာပေါ်မှာ စတင်ခြေချ လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတုန်းကလိုပေါ့။ မားစ်ဂြိုလ်ကို ပထမဆုံးခြေချနိုင်တဲ့လူသားအဖြစ် မားစ်ဝမ်းအာကာသယာဉ်မှုးနာမည်ကို နောင်လာနောင်သားတွေ မှတ်မိကြမှာဖြစ်သလို သမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်နေမှာပါ။
credit to Mars One
ရှေ့ အပတ်ကပဲ ကိုယ်တို့ ကျောင်းက ပရော်ဖက်ဆာနာဂျစ်က မားဝမ်း ၁၀၀ ထဲမှာ အရွေးခံရတယ် might be on the ways to Mars ဆိုတဲ့ပို့ စ်ဖတ်ရတော့မှ ကိုယ်တို့ ပရော်ဖက်ဆာလည်း မားဂြိုလ်ကို သွားချင်မှန်း သိတော့တယ်။ Meet with Mars 100 ရဲ့၆ ခုမြောက်မှာ နာဂျစ်နာဂျစ် ပရိုဖိုင်ကို တွေ့ ရပါတယ်။ ပရောက်ဖက်ဆာ နာဂျစ်က အသက် ၃၈၊ အီရတ်က။ ကိုယ်တို့ လိုပဲ တချိန်တုန်းက မာစတာလာတက်တဲ့ ကျောင်းသား oustanding student တစ်တန်းလုံးမှာ အမှတ်အများဆုံးရလို့ကျောင်းကနေ ဆရာအဖြစ်ခန့် ထားတာ။ ခုတော့ နီဘားစကားတက္ကသိုလ်မှာ ပီအိတ်ခ်ျဒီ တက်နေတယ်။ ပရော်ဖက်ဆာက အရမ်းတော်တယ် စာသင်လည်း ကောင်းတယ် အရမ်းထရိန်းတယ် မနက်ဆို ၉ ၄၅ ကတည်းက အတန်းရောက်ရတယ် Quizz ဖြေဖို့ ။ အိမ်စာတွေ အများကြီးပေးတယ် စာတွေအများကြီး ဖတ်ရတယ်။ ကျောင်းသားတွေဆီက သင်ယူသလို စာသင်ရတာ အရမ်းကြိုက်တယ်။ ကျောင်းသားတွေက သူ့ ကို သဘောကျကြတယ်။ အရည်အချင်းတွေ ပိုထွက်လာအောင် သင်ပေးတယ်။ ပရော်ဖက်ဆာရဲ့ဗွီဒီယိုနားထောင်ကြည့်တော့ သူ့ စတိုင်အတိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုလွန်ကဲတဲ့ လေသံဟန်ပန်ကတော့ မပြောင်းမလဲ။ သူ့ ဘဝမှာ မဖြစ်ခဲ့တာ ဘယ်တော့မှ မရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့ မားစ်ဝမ်းအာကာသယာဉ်မှုးဖြစ်ဖို့သူဟာ သင့်တော့်တဲ့သူပါတဲ့။ ကို်ယ့်ပရောက်ဖက်ဆာမို့မားစ်ဝမ်းရဲ့နောက်ဆုံး ၃ ယောက်ထဲ ပါဝင်စေလို့ဆုမတောင်းဘဲ သူ့ ဘဝမှာ မဖြစ်ခဲ့တာ ဘယ်တော့မှ မရှိခဲ့ဘူးလို့မကြုံးဝါးနိုင်အောင် နောက်ဆုံး ၃ ယောက်ထဲ မပါပါစေနဲ့ လို့တွေးနေမိတယ်။ အတော်ဆိုးတဲ့ တပည့်မ ကိုယ့်ဆရာကို မားစ်ဝမ်း ၃ ယောက်ထဲ မပါစေဖို့ဆုတောင်းနေတယ်။ မားစ်ဝမ်းအကြောင်း စိတ်ဝင်စားရင် ဒီလင့်ခ် မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ခုတလော ကိုယ့်ခြေထောက် အဆစ်အမြစ်တွေ နာလို့ လမ်းတောင်ကောင်းကောင်း မလျှောက်နိုင်ဘူး။ နာလို့ တညလုံး အိပ်မပျော်ဘူး နောက်နေ့နေမကောင်းခွင့် ယူမလားတောင် စဉ်းစားမိတယ်။ အိမ်မှာနေရင် ပိုဆိုးလို့ရုံးတက်တယ် ဒါပေမဲ့ လမ်းလျှောက်နှုန်းက လိပ်လောက်နီးနီးဆိုတော့ ရုံးကလူတွေက ခြေထောက်ဘာဖြစ်တာလဲ မေးကြတာပေါ့။ လူးပပ်လို့ ပြောရင် အရှည်ကြီး ရှင်းပြရမှာမို့လေးဖက်နာလို့ ပဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ပြောတော့ ဟင် အသက်က ငယ်ငယ်ကလေးပဲ ရှိသေးတယ် လေးဖက်နာဖြစ်လားတဲ့။ ကိုယ်တို့ အိမ်နားက ၁၁ နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးက လက်ဆစ်တွေ ယောင်နေတယ် စာမရေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောတော့ စာမရေးချင်လို့လက်နာတယ်လို့ ညာတာလားလို့တွေးမိတယ်။ ဆရာဝန် သွားပြတော့မှ လေးဖက်နာတဲ့ လေးဖက်နာဆိုတာ အသက်အရွယ် မရွေးဘူး။ ကိုယ့်ဆူပါဗိုက်ဆာ တရုတ်မယန်းက ကျားတံဆိပ်ဘမ်းဘူး လာပေးတော့ ကိုယ့်မှာ အံ့သြလို့ ။ ကိုယ်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျားတံဆိပ်ဘမ်းဘူးတွေ သုံးသေးတယ် ခုတော့ မတွေ့ တော့ဘူး။ သူတို့ တရုတ်ပြည်မှာနဲ့အိန္ဒိယမှာ ခေတ်စားတယ် ခုထိ သုံးနေကြတုန်းတဲ့။ သိလားယန်း အဲဒီကျားတံဆိပ် တီထွင်တဲ့သူက ကိုယ်တို့ မြန်မာပြည်မှာမွေးတဲ့ တရုတ်။ နောက်တော့ စင်္ကာပူကို ပြောင်းရွှေ့ သွားတယ်။ ကျားတံဆိပ်ဘမ်းဘူးတွေနဲ့ချမ်းသာလာတော့ မြန်မာပြည်ကိုလာပြီး အလှုအတန်းတွေ လုပ်တယ်။ လှိုင်မြို့ နယ် ဘူတာရုံလမ်း လှိုင်ဈေးကြီးအနီး ကျားကျောင်းဆိုတာ အဲဒီသူဋ္ဌေးကြီး လှုဒါန်းဆောက်လုပ်ခဲ့တာလို့ပြောကြတယ်။ ခုတော့ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံ့ ဖြိုးကျောင်း ဖြစ်နေတယ် ကျောင်းဆောင်မျက်နှာစာမှာ ကျားရုပ်ကြီးကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရတုန်း ခုတော့ ရှိသေးရဲ့ လားမသိ။
နောက်တစ်ပတ်ကျရင် ဝါရှင်တန်ဒီစီက ချယ်ရီပွဲတော်ကို သွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ချယ်ရီတွေက ဧပရယ် ၁၁ ကနေ ၁၄ ကြားမှာ အစွမ်းကုန်ပွင့်မယ်လို့ခန့် မှန်းကြတယ်။ ခုထိတော့ အဖူးလေးပဲ ထွက်သေးတယ်။ ခရီးမသွားဖြစ်တာ ၄ လလောက်ရှိပြီ ၂၀၁၅ ရဲ့ပထမဆုံးခရီး ဆိုပါတော့။ ချယ်ရီပွဲတော်က ဓာတ်ပုံတွေ တင်ပါဦးမယ်။
ဧပရယ် ၄၊ ၂၀၁၅။
that doesn't look like the authentic tiger balm...